(मन थामेर पढ्नुहोस)चरम यातनापछि अस्पतालमै आ त्मह त्या गरेकी डा. पायलले आमाबुवालाई अन्तिम समयमा लेखेको त्यो चिट्ठी -
(मन थामेर पढ्नुहोस)चरम यातनापछि अस्पतालमै आ त्मह त्या गरेकी डा. पायलले आमाबुवालाई अन्तिम समयमा लेखेको त्यो चिट्ठी
१५ श्रावण २०७६, बुधबार ११:२६ July 31, 2019 GS Nepal0Comments
पायल तड्वी मुम्बईको बीवाईएल नायर अस्पतालमा जुनियर डाक्टर थिइन् । गाइनोकोलोजीमा एमडी गरिरहेकी थिइन् । आफ्ना तीन वरिष्ठ डाक्टरको उत्पीडन र जातीगत टिप्पणीका कारण तनावमा भएकी उनले २२ मे मा अस्पतालको कोठामा झुण्डिएर आ त्मह त्या गरेकी थिइन् । डाक्टर पायल तड्वीले होस्टेलको कोठामा आ त्मह त्या गरेकी थिइन् । यो मामलाा तीन सिनियर डाक्टरलाई प क्राउ गरेको थियो । घटना भएको दुई महिना बढी बितिसकेको छ । र यतिका समय बितिसकेपछि पनि उनले अन्तिम समयमा लेखेको तीन पानाको चिट्ठी सार्वजनिक भएको छ जुन उनले आमा–बुवालाई लेखेकी छिन् । यसलाई चिट्ठीभन्दा पनि सु साइड नोट भन्न मिल्छ जसमा डाक्टर तड्वीले आ त्मह त्याको कारणबारे जानकारी दिएकी छिन् ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि मैले उनीहरुलाई सहिरहेको थिएँ, मात्र एउटा आशाले कि एकदिन यी सबै कुरा समाप्त हुनेछ । तर अब मैले मात्र अन्त्य देखिरहेकी छु । वास्तवमा योबाट बाहिर निस्कने कुनै बाटो छैन, मैले यहाँबाट बाहिर निस्कने कुनै बाटो देखिरहेको छैन । म फसेकी छु । दिन बित्दै गए तर यहाँबाट निस्कने कुनै बाटो देखिरहेको छैन । यस्तो किन ? हामीमा यस्तो के छ जसले यस्तो समस्या झेल्नुपरिरहेको छ ।
यो कदम उठाएकोमा म माफी चाहन्छु । आफ्ना साथीबारे धेरै सोचेँ, मलाई थाहा छैन कि स्नेहलले यी तीनजनाको कसरी सामना गर्नेछिन् । उनलाई ती व्यक्तिहरुको अगाडि छोड्न डर लागिरहेको छ ।’
यो मामलामा बम्बे हाइकोर्टमा सुनुवाई चलिरहेको छ ।
← सिन्धुपाल्चोकको एक सरकारी कार्यालय यस्तो हालत बनाइदिए।
निर्मला प्रकरणले – रबि लामिछाने माथी नै लाग्यो यस्तो आरोप। →
एसईई परिक्षामा यस्तो सम्म- चिट चोराउने मान्छे लखेट्न हवाई फायर
१३ चैत्र २०७५, बुधबार १६:३३ GS Nepal 0
राजधानी काठमाडौँमा युवतीहरूको यस्तो धन्दा, जुन थाहा पाउँदा प्रहरी नै परे चकित
१७ माघ २०७५, बिहीबार ०१:२६ GS Nepal 0